के हो न्युक्लियर मेडिसिन सेवा? कस्ता बिरामीले लाभ लिन सक्छन्?
२०७६ माघ ११ शनिबार १०:५९:०० प्रकाशित
नाभिकीय चिकित्सा (न्युक्लियर मेडिसिन) चिकित्सा शास्त्रको एक विधा हो, जसमा रेडियोधर्मी दबाई प्रयोग गरेर मानव शरीरका विभिन्न रोगको निदान र उपचार गरिन्छ। यस विभागको विशेष प्रयोग क्यान्सर भए तापनि अन्य सबै अंगको जाँच गर्न सकिन्छ। यस विधामा विकिरणको रुपमा अल्फा कण, बिटा कण र गामा कणको प्रयोग गरिन्छ।
नाभकीय चिकित्सा नेपालमा कुन अवस्थामा छ?
यो निकै नै अत्याधुनिक सेवा भएकोले नेपालमा भर्खर शिशु अवस्थामा रहेको छ। हाल नेपालमा यससम्बन्धी जम्माजम्मी ७ जनामात्र एमडी डाक्टर छन्। नेपालको अन्तिम अस्पताल महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा समेत यस विधामा विभाग नै नहुनु लाजमर्दो कुरा हो।
काठमाडौंमा दुई वटा प्राइभेट पेट स्क्यान रहेका छन्। वीर अस्पतालमा गामा क्यामरा र अर्को महाराजगञ्जस्थित प्राइभेटमा एक गामा क्यामरा मेसिन रहेको छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पनि एक गामा क्यामरा मेसिन छ। हल सिएमसी मेडिकल कलेजले यस विधाको सुरुवात गर्नको निम्ति विशेष पहल गरेको छ।
नेपालका ठूला ठूला अस्पतालमा समेत यस सेवा नहुदाँ त्यसको असर कस्तो पर्छ?
नेपालका राष्ट्रिय स्तरका अस्पतालमा समेत यस सेवा नहुदाँ कतिपय रोगको उचित निदान र उपचार हुन सकेको छैन भने कति बिरामीहरु त्यसको निम्ति विशेषतः भारतमा रिफर गर्नुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको स्वास्थ्य र हाम्रो उपचारप्रति बिरामीको विश्वासमा पर्ने गरेको छ। अबका दिनहरुमा यी सबै सेवा नेपालमा गर्न सके बिरामीले उचित स्वास्थ्यलाभ पाउन सक्थे र भारतमा उपचार गराउनु पर्दाको आर्थिक भार र अन्य कठिनाइबाट मुक्ति पाउन सक्थे।
के नाभकीय चिकित्सा सेवा नेपालबाटै पूर्ण रुपमा दिन आजको समयमा सम्भव छ?
अवश्य पनि सम्भव छ। किनभने आजको समयमा नेपालमा यस विषयको पढाइ नभए तापनि विदेशबाट उत्पादन भएर ७ वटा दक्ष जनशक्ति (डाक्टरहरु) नेपालमै सेवा दिइरहेका छन्।
कसरी हुन्छ त रोगको निदान?
यसमा प्रयोग गरिने रेडियोधर्मी दबाई रोगले ग्रसित भएको अंगमा जान्छ र सामान्य अंगमा भन्दा रोगले ग्रसित भएको अंगबाट विकिरण नक्शा कि त गामा क्यामरा, कि त पेट स्क्यान मेसिनद्वारा गरिन्छ।
यस विधिबाट रोग चाहे प्रारम्भिक चरणमा होस् वा गम्भीर अवस्थामा होस्, त्यसको प्रभावशाली ढङ्गमा गहन जाँच र उपचार सम्भव हुन्छ। यसमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक मेसिनद्वारा रोग लागेको तर निकै नै प्रारम्भिक चरणको रोग पतालाग्न सक्छ ।सिटि स्क्यान र एम.आर.आइ. स्क्यानले देखाउन नसक्ने प्रारम्भिक अवस्थाका रोगहरु समेत यस विधाद्वारा सजिलै पत्ता लाग्न सक्छ। कतिपय रोग र क्यान्सर त यसले जरैबाट उखेलर निर्मूल पार्न निकै प्रभावशाली उपचार पद्धतिको विकास गरिसकेको छ। जस्तैः थाइरोइडका बिरामी र क्यान्सर बिरामी। यसले बिरामीको विस्तृत जानकारी, त्यसको प्रभाव, उपचारको प्रभावशाली उपाय तथा भविष्यमा त्यसको गति, दिशा र भविष्य समेत बताउन सक्छ।
यसमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी दबाइको दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) शून्यप्रायः नै छ। यो विधा निकै सुरक्षित, दर्दरहित र प्रभावशाली छ। निदानको लागि प्रयोग हुने रेडियोधर्मी दबाइको मात्रा यति न्यून हुन्छ कि त्यसले शरीरका तन्तुमा केही असर पर्दैन। नाभकीय चिकित्साद्वारा क्यान्सर, मुटु, मस्तिष्क, हड्डी, मिर्गौला, थाइरोइड, कलेजो आदिको निकै प्रभावशाली जाँच गर्न सकिन्छ।
(डा पौडेल चितवन मेडिकल कलेज न्युक्लियर मेडिसिन सेवाका प्रमुख हुन्)
६. प्रसूति गृहमा २४ हप्तामा जन्मेको बच्चाको घटनाः यस्तो छ आफन्त र अस्पतालको भनाइ
९. २ सय ६० जना कोरोना संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत